Bogga ugu weyn > Palmitoylethanolamide (PEA)
Hadaad raadinayso tayo sare Palmitoylethanolamide (PEA) budada iibka ah, markaa waxaad joogtaa meesha saxda ah. Waxaan nahay mid ka mid ah kuwa ugu caansan, aqoonta, iyo khibrada badan ee Palmitoylethanolamide (PEA) soosaarayaasha Shiinaha. Waxaan bixinaa alaab saafi ah oo si fiican loo soo baakadeeyay kuwaas oo had iyo jeer ay tijaabiyaan sheybaar heer caalami ah oo heer caalami ah si loo hubiyo nadiifnimada iyo badbaadada Waxaan had iyo jeer bixinaa amarro ka kala socda Mareykanka, Yurub, Aasiya, iyo qeybaha kale ee adduunka. Sidaas darteed haddii aad rabto inaad iibsato Palmitoylethanolamide (digir) budada tayada ugu sareysa ee suurtogalka ah, kaliya nagala soo xiriir cofttek.com.
Maxaa loo adeegsadaa Palmitoylethanolamide?
Waa maxay waxyeelada digirtu?
Phenethylamine sharci ma yahay?
Mudo intee le'eg ayuu soconayaa PEA?
Miyay phenylethylamine ku dhici doontaa baaritaanka daroogada?
Cuncunka dhejisku ma mid nabdoon baa?
Mudo intee le'eg ayay ku qaadataa in Digirtu ay laado?
Ma ka iibsan kartaa phenylethylamine dukaamada?
Muddo intee le'eg ayay qaadataa in digirku shaqeeyo?
Digir miyuu kaa caawiyaa hurdada?
Digirtu ma wax kiciya baa?
Muddo intee le'eg ayuu phenylethylamine ku sii jiraa nidaamkaaga?
Shukulaatada ma ku jirtaa phenylethylamine?
Halkee laga helaa phenylethylamine?
Phenylethylamine miyuu kugu sarraysiiyaa?
Mudo intee le'eg ayay Hordenine ku sii jirtaa nidaamkaaga?
Palmitoylethanolamide (PEA) ma nabad baa?
Xagee ka heli karaa Palmitoylethanolamide?
Waa maxay kareemka digirtu?
Maxaan Ugu Baahanahay Palmitoylethanolamide (PEA)?
Waa maxay PEA fibromyalgia?
Waa maxay xanuun joojiye neuropathic?
Sideen ugu seexan karaa xanuunka neuropathic?
Biyaha la cabo miyuu ka caawiyaa neuropathy?
Maxaa dareeraha digirta loo isticmaalaa?
Halkee ayuu digirtu ka yimaadaa?
Waa maxay daaweynta digirta?
Miyuu digirtu ku badan yahay bukaanada qaba hypovolemia?
Midkee kuwan soosocda ayaa sababi kara oo sababi kara laxanka digirta?
Palmitoylethanolamide (PEA) waxay ka tirsan tahay qoyska endocannabinoid, waa koox amids acid fat. PEA waxaa la caddeeyey inay leedahay falanqeeye ficil-celin iyo anti-bararka waxaana loo adeegsaday dhowr daraasadood oo la xakameeyay oo diiradda lagu saaray maaraynta xannuunka dabadheer ee bukaannada qaangaarka ah ee leh xaalado caafimaad oo kala duwan.
Lagu qaatay qiyaaso ah 500mg-1.5g qiyaaskiiba, dhowrkii saacadoodba, PEA waxay siisaa isticmaalaha dareen farxadeed, tamar, kicin, iyo guud ahaan ladnaan. Esp marka lagu daro mao-b inhibitor, hordenine, PEA waxay qaadataa heer cusub oo farxad iyo farxad guud.
Ma jiraan wax dhibaato ah oo dhibaato la og yahay oo la og yahay. PEA waa lala wada qaadan karaa walax kasta oo kale. Waxay kor u qaadeysaa saameynta xannuun-yareynta ee xanuunka 'analgesics' iyo anti-inflammatory. Palmitoylethanolamide waxaa loo isticmaali karaa iyadoo lagu daro walxo kale iyada oo aan wax saameyn ah lagaa helin.
Phenethylamine (PEA) waa unug dabiici ah, alkaloid dabiici ah monoamine, iyo raad raaca amine, oo u shaqeeya sidii habka neerfaha dhexe ee kiciya dadka.
Marka afka lagaa qaado: Qaadashada Palmitoylethanolamide waa macquul SAFE u ah dadka waaweyn badankood marka la isticmaalo ilaa 3 bilood. Dhibaatooyinka soo raaca ee suurtogalka ah, sida caloosha oo kacsan, aad ayey u yar yihiin. Ma jiro macluumaad la isku halleyn karo oo ku filan oo lagu ogaan karo haddii Palmitoylethanolamide ay ammaan tahay in la isticmaalo in ka badan 3 bilood.
Waxaa muhiim ah in la ogaado in melatonin uusan si adag u xakamayn Maamulka Cuntada iyo Dawooyinka (FDA). Taasi waa sababta oo ah melatonin looma tixgeliyo daroogo. Sidaa darteed, waxaa loo iibin karaa sida nafaqada dheeraadka ah sida fiitamiinnada iyo macdanta, oo aan si dhow ula socon FDA.
PEA waa walax dabiici ah oo jirku soo saaro; waa mid waxtar badan oo ammaan ah in loo isticmaalo kaabis ahaan xanuunka iyo caabuqa.
Digirtu waxay qaadataa 7 ilaa 30 maalmood inay soobaxdo. Digirgu si dhakhso leh ayuu u soo bixi doonaa haddii heerkulka carradu uu yahay 65 illaa 70 Fahrenheit. Waad dedejin kartaa hawsha biqilka adigoo qoyaya digir 24 ilaa 48 saacadood kahor intaadan beerin. Dabcan, waxaa jira arrimo kale oo saameeya sida ugu dhakhsaha badan digirku inuu u soo baxo una kori doono.
Kaabisyadan marka la cuno waxay ka caawiyaan kordhinta heerka waxqabadka maskaxda iyo yareynta buuqa. Waxaa laga heli karaa miiska dushiisa, midna uma baahna warqad dhakhtar oo lagu iibsado. Phenylethylamine sidoo kale waxaa loo isticmaalaa in lagu xoojiyo diiradda iyo feejignaanta.
Waxaan soo saarnay jadwalkaan daaweynta ka dib markii aan daaweynay boqolaal bukaanno xanuun neuropathic ah. Iyada oo ku saleysan khibradeena caafimaad, waxaan u maleyneynaa in laga bilaabo qaabka sublingual ee PEA ugu yaraan 10 maalmood laga yaabo inay gacan ka geysato in si dhakhso leh loo gaaro heerarka daaweynta ee ku filan ee PEA.
Nooc dufan ah oo si dabiici ah looga helo jidhka ayaa fure u noqon kara hurdo fiican habeenkii. Cilmi baarayaashu waxay rajeynayaan in meykulka loo yaqaanno PEA - ama Palmitoylethanolamide - kaliya uusan kaa caawin karin hurdada laakiin sidoo kale la dagaalanka xanuunka iyo inuu yareeyo caabuqa.
Waa lala qaadan karaa daawooyinka kale ee xanuunka ama kali ahaan, sida uu kugula taliyay xirfadlahaaga daryeelka caafimaadka, si loo taageero xanuunka joojinta. PEA sidoo kale waxay kaa caawin kartaa yareynta ku tiirsanaanta daawooyinka xanuunka ee xoogga leh ee sababa waxyeelooyinka aan loo baahnayn. Faa'iidada ugu badan waxay qaadan kartaa ilaa 3 bilood laakiin natiijooyinka waxaa caadi ahaan lagu arkaa 4-6 toddobaad.
Shukulaatada ayaa leh culeyska ugu badan ee cunno kasta oo ah phenylethylamine, taas oo ah kiimikada laga soo saaro maskaxda marka qofku jacaylka hayo. Haddana doorka "amphetamine shukulaatada" waa la isku haystaa. Inta badan haddii aaney ahayn dhammaan waxyaabaha ka soo baxa shukulaatada-ka soo baxa ee 'phenylethylamine' waa la shiidey ka hor inta aysan gaarin CNS.
Naasleyda, phenethylamine waxaa laga soosaaraa amino acid L-phenylalanine iyadoo loo adeegsado enzyme aromatic L-amino acid decarboxylase iyadoo loo marayo enzymatic decarboxylation. Marka lagu daro joogitaankiisa naasleyda, phenethylamine waxaa laga helaa nooleyaal iyo cunnooyin kale oo badan, sida shukulaatada, gaar ahaan halsano jeermiska kadib.
Qaadashada qiyaasta 500mg-1.5g halkii qiyaasta, dhowrkii saacadoodba, PEA waxay siisaa isticmaalaha dareen farxadeed, tamar, kicin, iyo guud ahaan ladnaan. Esp marka lagu daro mao-b inhibitor, hordenine, PEA waxay qaadataa heer cusub oo farxad iyo farxad guud.
Shaciir ahaan, heerarka hordenine-ka waxay gaarayaan ugu badnaan 5-11 maalmood gudahood marka biqilka, ka dib si tartiib tartiib ah ayuu u yaraadaa illaa iyo inta raadkiisu sii hadhayo hal bil kadib. Intaas waxaa sii dheer, hordenine waxaa lagu soo koobay asal ahaan xididdada.
In kasta oo Palmitoylethanolamide uu jirka si fiican ugu dulqaadanayo, haddii ay dhacdo in dadku ay dareemaan waxyeellooyin-ka-soo-baxa, waxaa lagula talinayaa inay yareeyaan qiyaasta daawada illaa 400 mg maalintii.
Tan ugu muhiimsan, xarunta waa in aan la qaadan wax ka badan saddex bilood. Adeegsiga PEA ee joogtada ah wuxuu horseedi karaa arrimaha caloosha. Si kastaba ha noqotee, waa saameyn-side oo si dhif ah loo dareemay. Tan ka sii muhiimsan, PEA looma adeegsan doono maqaarka iyo haweenka uurka leh iyo naasnuujinta waa inay ka fogaadaan isticmaalkeeda maadaama aysan jirin baaritaan ama caddayn ku filan oo sheeganaysa in dawada ay amaan u tahay kooxahan. Sidoo kale, haddii aad ku xanuunayso xaalad kasta, waxaa had iyo goor fiican inaad la tashatid dhakhtar ka hor intaadan qaadan kaabis sida Palmitoylethanolamide.
Jawaabtu waa Cofttek. Cofttek waa soo saare wax soo saar alaab ceeriin ah oo soo ifbaxay sanadkii 2008. Shirkadu waxay ku faantaa sharaf aad u sareysa kooxdeeda xirfada sare ee R&D ee shaqeeya saacad walba si loo hubiyo in alaabada ceyriinka ah ee la siinayo macaamiisha ay tahay mid aad u tayo sareysa. Muhiimad ahaan, shirkaddu waxay maalgashi xoog leh ku sameysaa bayoolajiyadda iyo baaritaanka falanqaynta. Dhammaan alaabooyinka ay shirkaddu iibiso waxaa lagu abuuray warshad ballaadhan oo tiknoolajiyadeed oo bayoolaji ah taas oo ku faanaysa nidaamyada alaab-qeybiyeyaasha bislaaday iyo tas-hiilaad farsamo ee ugu dambeeyay. Waa ballanqaadkan ay shirkaddu samaysay inay soo saarto alaab ceyriin oo tayo sare leh taasoo ka dhigtay Cofttek magac si wanaagsan looga aqoonsan yahay suuqa waxyaabaha cayriin. Maanta, waxay leedahay macaamiil adduunka oo dhan.
digir kareemku waa kareem ay kujiraan uruurinta ugufiican ee walxaha dabiiciga ah iyo difaaca Palmitoylethanolamide (PEA). Sidaas awgeed kareemka 'PEA' waxaa loo isticmaali karaa kaabis wanaagsan oo loogu talagalay saameynta kaabsoosha jirka.
Palmitoylethanolamide (PEA) waa molecule dufan leh oo lagu soo saaro qadar yar oo jirka ah, badiyaa iyada oo laga jawaabayo dhaawaca unugyada ama unugyada ama dhaawaca muruqa. PEA waxaa si dabiici ah u soo saaray habka difaaca jirka si looga jawaabo xanuunka ama caabuqa. Palmitoylethanolamide, oo sidoo kale loo yaqaan 'PEA' waa dufan dabiici ah oo dhaca oo ku hoos dhaca kooxda amides dufanka leh. In kasta oo dhismahan ay soo saaraan nidaamka difaaca jirka, haddana wuxuu ku dhex jiraa xayawaanka iyo dhirta sidaa darteedna, waxaa laga soo qaadan karaa ilo dibedda ah, sida ukunta ukunta, soy lecithin, alfalfa, caano, looska iyo soybean. PEA waxay leedahay astaamo xanuun awood leh oo sidaas darteed, waxay awood u leedahay inay saameyn ku yeelato dhowr shaqooyin muhiim ah oo jirka ah oo ku dhex jira jirka.
PEA badiyaa waxaa loo qaadaa ujeedooyinka ka hortagga bararka iyo yareynta xanuunka. Marka, sidee ayuu PEA mar un ugu shaqeeyaa jirka gudahiisa? Markuu jirka gudihiisa galo, PEA wuxuu isku xiraa goob bartilmaameed ah oo damisa shaqada caabuqa ee unug kadib howsha qabashada. Muhiimad ahaan, cilmi-baarista qaarkood waxay muujineysaa in saameynta xanuunka ee PEA loo aaneyn karo awoodda xarunta ee carqaladeynta shaqada unugyada difaaca jirka ee gaarka ah ee mas'uulka ka ah gudbinta calaamadaha xanuunka. Iyadoo aan loo eegin waxa ay tahay habka saxda ah, hal shay ayaa hubaal ah in PEA ay bixiso gargaar ka yimaada xanuunka neuropathic iyo sidoo kale caabuq.
Sanadihii ugu dambeeyay, Palmitoylethanolamide (PEA) waxay ku aragtay xaalad kadis deg deg ah oo caan ah. In kasta oo astaamaha daawaynta ee PEA dib loo helay sannadihii 1950-meeyadii ilaa iyo markaa, saynisyahano iyo cilmi-baarayaashuba waxay baaris ballaadhan ku sameeyeen xaruntaas, dhowrkii sano ee la soo dhaafay, danta PEA ayaa korortay. Tani waxay ugu horreyntii sabab u tahay doorka ilaalinta iyo bogsashada ee xarunta ay ka dhex ciyaari karto jirka dhexdiisa iyo sidoo kale awooda ay u leedahay inay wax ka qabato caabuqyo fara badan oo kala duwan iyo arrimaha neuropathic.
Si kastaba ha noqotee, jidhka bini'aadamku wuxuu soo saaraa PEA qadar aad u yar oo marar badanna, qadarkani kuma filna in lagu xakameeyo caabuqa iyo xanuunka sidaas awgeed, dadka badanaa waxaa lagula talinayaa inay qaataan dheefaha PEA. Yareynta xanuunka iyo caabuqa ayaa ah mid ka mid ah faa'iidooyinka badan ee laga helo PEA.
Maaddaama ay tahay wax si dabiici ah u dhaca kaabisyada loo yaqaan 'PEA supplements' ayaa lagu kala saaraa Australia, iyo dalal kale oo badan, sida wax soo saarka cuntada, oo aan daawo ahayn. PEA waxaa lagu muujiyay inay leedahay antiinflammatory, antinociceptive, anticonvulsant iyo neuroprotective guryaha waxaana sii kordheysa loo adeegsadaa daaweynta xanuunka daba dheeraada.
Daaweynta Xanuunka Xanuunka 'Neuropathic Pain Treatment' Anticonvulsant iyo daawada murugada badanaa waa safka ugu horeeya ee daaweynta. Qaar ka mid ah daraasadaha xanuunka neuropathic waxay soo jeedinayaan isticmaalka daawooyinka anti-inflammatory non-steroidal anti-inflammatory (NSAIDs), sida Aleve ama Motrin, waxay yareyn karaan xanuunka. Dadka qaarkiis waxaa laga yaabaa inay u baahdaan xanuun joojiye ka xoog badan.
Ku seexashada jilbahaaga oo sarreysa waxay yareyn kartaa astaamahaaga xanuunka leh iyadoo la yareynayo cadaadiska suufkaaga lumbar uu dhigaayo xididdadaada xididdada. U jiifso dhabarkaaga — cagahaaga iyo badhidaada la xiriir sariirta oo jilbahaaga u yara laaban dhinaca saqafka.
Istaraatijiyadaha Fududeynta Xanuunka Neerfaha. Sonkorta ku hay. Haddii aad sonkorow qabto, sonkorta dhiigaaga xakamee. Ka soco Jimicsigu wuxuu sii daayaa xanuun baabi'iye dabiici ah oo loo yaqaan endorfin. Cagahaaga salaax. Haddii cagaha ay saameeyaan xanuunka neerfaha, waxaa la joogaa waqtigii xoogga la saari lahaa daryeelka cagaha.
Kaliya maahan biyaha diiran inay nastaan, laakiin sidoo kale waxay sare u qaadi kartaa wareegga jirkaaga oo dhan. "Waxay ku siin kartaa gargaar deg deg ah," ayuu yiri Vinik. Laakiin sababta oo ah cudurka neerfaha ee kaadi macaanku waxay u horseedi kartaa lumitaanka dareenka, hubi inaysan biyuhu aad u kululayn ka hor intaadan soo gelin.
Looma isticmaali karo haweenka uurka leh. Palmitoylethanolamide waxay kaa caawin kartaa nafaqeynta wax ka qabashada bararka iyo xanuunka daba dheeraada. Waa in lagu qaataa oo keliya kormeerka caafimaadka.
Palmitoylethanolamide waa kiimiko laga sameeyo baruurta. Waxaa si dabiici ah looga helaa cunnooyinka ay ka midka yihiin ukunta iyo looska, iyo jirka bini'aadamka. Waxaa sidoo kale loo isticmaalaa daawo ahaan.
Epinephrine waa in lagu qaataa 1-mg qaadasho faleebada / faleebada (IV / IO) 3-5 dii daqiiqo ee kasta inta lagu gudajiro qabashada dhaqdhaqaaqa korantada wadnaha (PEA). Qiyaasaha sare ee epinephrine ayaa la darsay mana muujinayaan wax horumar ah oo ku saabsan noolaanshaha ama natiijooyinka neerfaha ee bukaannada badankood.
Qeybta 'etiologies' ee 'PEA etiologies', been-abuurka 'PEA' waxaa badanaa keena hypovolemia, tachydysrhythmias, hoos u dhaca wadnaha, ama xannibaadaha wareegga, sida sambabada sambabka, xinjirta, iyo xiisadda pneumothorax.
Hypovolemia iyo hypoxia waa labada sababood ee ugu badan ee keena PEA. Iyagu sidoo kale waa kuwa ugu fudud ee dib looga noqon karo waana inay ku sarreysaa meesha ugu sarreysa ee cudur kasta oo kala duwan. Haddii shaqsigu leeyahay soo noqoshada wareegga isdaba-joogga ah (ROSC), u gudub daryeelka xannibaadda wadnaha ka dib.
Dhowrkii sano ee la soo dhaafey, caan noqoshada Palmitoylethanolamide waxaa ku soo kordhey kor u kac weyn, ugu horrayn maxaa yeelay dadku aad ayey uga war heleen isticmaalkeeda dhowr ah. Maalmahan, dadku waxay u isticmaalaan Palmitoylethanolamide ugu horreyntii saameynteeda xanuunka, laakiin sidoo kale waxaa badanaa loo qoraa cudurada halista ah, sida cudurka Lou Gehrig, cudurka macaanka ee cudurka macaanka, sclerosis badan, fibromyalgia, carpal tunnel syndrome, glaucoma, autism, cambaarta, endometriosis iyo sidoo kale cuduro kale oo kala duwan. Maalmahan, kaabisyada Palmitoylethanolamide (PEA) ayaa sidoo kale dadku u isticmaalaan inay kor u qaadaan miisaanka oo yaraada. Si kastaba ha noqotee, cilmi baaris dheeraad ah ayaa loo baahan yahay in lagu sameeyo aaggan.
① Daraasad hore waxay muujineysaa natiijooyin rajo leh oo ku saabsan daaweynta cudurka Lou Gehrig
Lou Gehrig's Disease ama Amyotrophic lateral sclerosis (ALS) waa cudur naf-gooyada ah oo u horseedda hoos u dhaca mootada iyo neerfaha uguna dambeyn curyaannimo. Daraasad hore waxay muujisay in Palmitoylethanolamide markii lala qaato riluzole, ay ka caawin karto hagaajinta xaaladan. PEA waa endocannabinoid oo hagaajisa shaqada sambabada ee bukaanka ALS.
② Waxay ka caawisaa Cudurka Carpal Tunnel Syndrome
Carpal tunnel Syndrome waa xaalad saameyn ku yeelata gacanta. Dadka la il daran xaaladdan ayaa gacanta ku haysata garaacis iyo kabuubyo. Xaaladda waxay saameyneysaa gacanta oo dhan, oo ay ku jiraan dhammaan faraha oo dhan marka laga reebo far yar. Daraasad la sameeyay 2017 ayaa shaaca ka qaaday in PEA si wax ku ool ah loo istcimaali karo in lagu daaweeyo syndromes-ka murugada, oo ay kujirto Carpal Tunnel Syndrome. Sidaas awgeed, kaabisyada PEA waa la qaadi karaa si loo xakameeyo xanuunka iyo raaxo darrooyinka ay sababaan Carpal Tunnel Syndrome.
③ Waxay kaloo Taaban Tahay Ka Hortagga Sonkorowga Maskaxda iyo Fibromyalgia
Diabetic neuropathy waa dhaawac sokorowga ku dhaca oo dareemayaasha ah. Mid ka mid ah calaamadaha ugu caansan ee cudurka neerfaha ee macaanka waa xanuun ku dhaca lugaha iyo cagaha. Fibromyalgia, dhanka kale, waa xaalad saameysa nidaamka muruqyada. Daalka iyo arrimaha xusuusta agteeda, astaamaha ugu caansan ee fibromyalgia waa xanuun ku dhaca dhammaan nidaamka muruqyada.
Labada sonkorow ee cudurka macaanka iyo fibromyalgia labaduba waa xaalado xanuun badan oo aan aad u caadi ahayn. Nasiib wanaag, xanuunka la xidhiidha labadan xaaladood waxaa lagu xakamayn karaa isticmaalka palmitoylethanolamide.
④ Waxaa loo isticmaali karaa in lagu daaweeyo calaamadaha cudurka 'Sclerosis Multiple'
Cudurka 'Sclerosis Multiple' waa xaalad uu habka difaaca jirku u bilaabo inuu ku weeraro myelinka daboola dareemayaasha, taas oo iyana, horseedaysa hoos udhaca ama xiriirka ka dhexeeya maskaxda iyo jirka intiisa kale. Cudurku si buuxda ayuu u curyaami karaa. Si kastaba ha noqotee, daraasad horudhac ah ayaa muujineysa in PEA, markii lagu siinayo isku darka interferon-beta1a, ay gacan ka geysan karto yareynta astaamaha la xiriira Multiple Sclerosis.
⑤ Waa mid wax ku ool ah ka hortagga cudurka 'Glaucoma' iyo ciladaha 'Temporomandibular'
Cudurka 'Glaucoma' waa xaalad saameyn ku yeelata dareemaha indhaha waana sababta ugu weyn ee keenta indho la’aanta dadka da'doodu tahay 60 iyo wixii ka weyn. Dhibaatooyinka TMJ, dhinaca kale, waxay keenaan xanuun daanka. Baadhitaan la sameeyay ayaa muujinaya in palmitoylethanolamide ama PEA loo isticmaali karo daweynta xanuunka ay sababaan labadan xaaladood.
⑥ Faa'iidooyinka kale
Ka sokow adeegsiga aan kor ku soo sheegnay, PEA waxaa sidoo kale lagula talinayaa xanuunka dareemayaasha iyo sidoo kale baaritaanka qalliinka ka dambeeya qalitaanka. Xaaladaha qaarkood, waxaa sidoo kale loo isticmaalay in lagu daaweeyo xaalado kale, sida madax xanuun, niyad jab, canbaar, endometriosis, autism, kelyo xanuun iyo xanuun xanuun. PEA waxay kaloo muujisay xoogaa wax ku ool ah oo ka dhan ah miisaanka oo kordha. Si kastaba ha noqotee, baaritaanno dheeraad ah ayaa looga baahan yahay aagaggan.
Sanadihii la soo dhaafay, daraasado kala duwan ayaa isticmaalay qiyaaso kala duwan sidaa darteedna, wax qadar ah looma qaadan karo inay kaamil tahay. Si kastaba ha noqotee, dadka waxaa lagula talinayaa inay ilaashadaan daawadooda Palmitoylethanolamide (PEA) ee ka hooseysa 300-1,200 mg maalintii. Kuwa qaata daawada Palmitoylethanolamide waxaa lagula talinayaa in ay qaataan 350-400 mg saddex jeer maalintii, muddada qaadashadooduna waa inaysan ka badnaan 2 bilood guud ahaan.
(1) Gabriella Contarini, Davide Franceschini, Laura Facci, Massimo Barbierato, Pietro Giusti & Morena Zusso (2019) 'Isku-darka micronized Palmitoylethanolamide / luteolin isku-darka ayaa yareeya dhibcaha bukaan-socodka iyo calaamadaha molecular-ku-habboon ee qaabka jiirka ee tijaabada autoimmune encephalomyelitis', Joornaalka maskaxda,
(2) Maria Beatrice Passavanti, Aniello Alfieri, Maria Caterina Pace, Vincenzo Pota, Pasquale Sansone, Giacomo Piccinno, Manlio Barbarisi, Caterina Aurilio & Marco Fiore (2019) 'Codsiyada bukaan-socodka ee Palmitoylethanolamide ee maaraynta xanuunka: maamuuska dib-u-eegista', Muuqaalka Dib u eegista Nidaamka,
(3) Eleonora Palma, Jorge Mauricio Reyes-Ruiz, Diego Lopergolo, Cristina Roseti, Cristina Bertollini, Gabriele Ruffolo Pierangelo Cifelli, Emanuela Onesti, Cristina Limatola, Ricardo Miledi, Maurizio Inghillerid (2016) 'Acetylcholine receptors ka muruqa aadanaha sida bartilmaameedyada dawooyinka daaweynta ALS', Proc Natl Acad Sci US A.,.
(4) Di Cesare Mannelli, G. D'Agostino, A. Pacini, R. Russo, M. Zanardelli, C. Ghelardini, A. Calignano (2013) 'Palmitoylethanolamide waa Wakiilka Wax ka beddelka Cudurka ee Peripheral Neuropathy: Xanuunka Xanuunka iyo Neuroprotection Wadaag Meheradda PPAR-Alpha-Mediated', Dhexdhexaadiyeyaasha.
(6) SAFARKII LOO BARANAYO EGT
(7) OLEOYLETHANOLAMIDE (OEA) –CARTA SIXIRKA AH EE NOLOSHAADA
(8) Anandamide VS CBD: Keebaa U Fiican Caafimaadkaaga? Wax Walboo Aad U Baahan Tahay Inaad Ka Ogaato Iyaga!
(9) Waxkasta oo aad u Baahan Tahay Inaad Ka Ogaato Nikotinamide Riboside Chloride
(10) Magnesium L-Threonate Supplementon: Faa'iidooyinka, Qiyaasta, iyo Saamaynta Dhinacyada
(11) 6-da Faa'iidadood ee Caafimaadka ee Kaabista Resveratrol
(12) 5-ta Faa'iidadood ee Qaadashada Phosphatidylserine (PS)
(13) 5-ta Faa'iidadood ee Qaadashada Quful-tuurka Pyrroloquinoline (PQQ)
(14) Kordhinta Nootropic ee ugu Fiican Alpha GPC
(15) Kaabista Da'da ee ugu Fiican Nicotinamide Mononucleotide (NMN)
Ma u badbaadayaa eeygeyga oo leh cudur ku dhaca sambabada oo joogto ah
Bog cajiib ah oo aad halkan ku leedahay laakiin waxaan doonayay inaan ogaado haddii aad taqaanid golayaasha bulshada ee ka hadlaya mawduucyada laga hadlay halkan? Runtii aad ayaan u jeclaan lahaa inaan ka mid noqdo bulshada halkaas oo aan ka heli karo talooyinka shakhsiyaadka kale ee khibradda leh ee ay isku dan yihiin. Haddii aad hayso wax soo jeedin ah, fadlan ii soo sheeg. Allow kuu ducee!
Waxaan qaadanayay PEA (iyo CoQ10) ilaa xagaagii. Markii hore, waan u dulqaadan kari waayey arrimaha xiidmaha awgood. Hadda maskaxdayda maskaxeed iyo madax xanuunkuba way dhammaadeen, taas oo ah mid aad u qariib ah iyada oo aan haysto maalin kasta.
Xaqiiqdii waxaan qaataa PEA. Waxay si aan toos ahayn ugu shaqeysaa qabtayaasha cannabinoid. Waxay leedahay saameyn lagu daro marka lala qaato cannabinoids sida CBD. Badanaa waxaa lagu qaataa 1,200mg / maalin laakiin waxaan qaataa 400mg kaliya sababtoo ah waxaan ku jiraa qiyaasta sare ee CBD horeyba (200mg / maalin).
PEA si dabiici ah ayey jidhka ugu dhacdaa, oo aan balwad lahayn, dulqaad ma heli kartid waxaana la cadeeyay inay waxtar u leedahay xanuunka iyo caabuqa daraasadaha ilaa 1950-meeyadii ..
Ninkaygu wuu qaataa oo wuxuu u maleeyaa inay fiican tahay.
Waxaan jeclaan lahaa inaan kaaga mahadceliyo dadaalka aad geliseen qoraalkan boggan. Waxaan rajeynayaa inaan mar dambe sidoo kale kaa arko nuxurka heerka sare ah. Dhab ahaantii, awoodahaaga wax-qorista ee hal-abuurka ah ayaa igu dhiirri-geliyay in aan helo goobtayda gaarka ah hadda;)
Sababtoo ah mid ka mid ah halista ugu sareysa ee COVID-19 waxay umuuqataa duufaan cytokine ah halkaas oo caabuqu sababayo waxyeelo badan kahor nidaamkayaga difaaca wuxuu abuuri karaa unugyada difaaca jirka ee kufilan ladagaalanka fayraska waxay umuuqataa mid dheeri ah oo amaan ah oo caawineysa yareynta qadarka cytokines hab wanaagsan oo loogu oggolaado nidaamka difaaca jirka waqti uu kula dagaallamo cudurkan.
Tani sii wad fadlan, shaqo weyn!
dib u noolaansho
Aniga ahaan waxay iga caawisaa caabuqa. Sidoo kale caawimaad hurdo oo weyn, hawo quruxsan ka qaado nus-qaadasho.
Waxyaabahani waxay u muuqdaan kuwo rajo leh
Takhtarkeyga difaaca jirka ayaa kula taliyay Palmitoylethanolamide. Waxaan qaatay Mirica PEA muddo 3 bilood ah. Way adag tahay in la hubiyo. Astaamahaygu aad bay u fiicnaadeen, laakiin wakhti badan ayaa sidoo kale la soo dhaafay. Waan iska joojiyay qaadashadiis mana u fiirsanayo farqi weyn sida aan dareemayo. Ma aanan qabin wax saameyn ah intii aan qaadanaayay, marka ugu yaraan uma muuqan wax dhaawac ah.
Waxyaalaha badankood waxay ku fiican yihiin calool madhan, haddii aysan dhab ka ahayn taageerada oo muujineysa nuugista oo hagaagsan oo aan kaliya aheyn dufanka-milma, haddii aysan u keenin arrimaha caloosha (zinc)
Taas waxaan ku qaadan lahaa calool madhan oo waxaan u maleynayaa inaan marar badan sidan oo kale sameeyay.
Welp Waxaan qaatay qatar oo waxaan dalbaday qaar maanta. Daal xanuunka caloosha waxaan rajeynayaa inay shaqeyso.
Palmitoylethanolamide waa amide acid fido leh. Taasi waxay ka dhigan tahay inay jirkaaga ku jirto hadda.
Dadka qaarkiis ayaa uun ka dhigaya wax yar, heerarkaaguna waxay hoos u dhacaan markii aad sii weynaato. Marka kabku wuxuu kaa caawin karaa soo celinta heerarkaas. Waxaa sidoo kale laga helaa cuntooyinka, sidoo kale. Aad bay amaan u tahay. Dadka intiisa badani ma fahmaan waxa ay tahay, oo gebi ahaanba waa ay seegeen ujeedka.
Haddii aad tahay qof leh heerar dabiici ah oo wanaagsan oo ah PEA jirkaaga, waxay u badan tahay inaadan waxba dareemi doonin. Si kastaba ha noqotee, dadka si dabiici ah u leh heerar hoose ayaa si xoog leh u dareema saameynta. Tani waa sababta aad u aragto aragtiyo kala-bax ah.
Xanuun dartiis waxaan dhawaan ogaaday PEA oo aan ku qaadan jiray 1200mg maalin kasta waxayna umuuqataa inay caawinayso
Hooyaday waxay u tagtay dhakhtarkooda rheumatologist maalin dhaweyd, waxaana loo sheegay in biomarkers-keeda ee caabuqa ay fiicnaayeen, markii ugu horeysay abid! Si sax ah uma xasuusto-- waanan hubaa in hooyaday aysan sameynin - miisaanka ay adeegsanayeen, laakiin waxay ii sheegtay kala duwanaanshaha ugu wanaagsan ee noolahaan guud ee caabuqa uu u dhexeeyay 0-30, badanaana way ka fiican tahay 60. Markan, waxay ahayd 15 jir.
Waxaan si joogto ah ugu qaatay nus-saacaddayda si aan u akhriyo waxa ku jira boggan markasta oo ay weheliso koob kafee ah.
Palmitoylethanolamide ayaa uga fiican caabuq iyo xanuun. Oleamide waxay u roon tahay hurdo. Labaduba waxay kufiicanyihiin difaaca jirka. Waxaan u dooranay PEA Difaaceena Difaaca si aan u keenin lulmo.
Waxaan sidoo kale qabaa madax xanuunka dhanjafka badanaa, badanaa 1-2 jeer bishii iyo Palmitoylethanolamide ayaa mucjisooyin ii ah aniga markii madax xanuunka dhanjafku hayo.
Waxaan ku qaadanayay PEA budada. Waxaan u helay inay horumar yar ka sameyso xanuunka dhammaan waxyaabaha kale ee aan qaadanayo.
Waa hagaag mid waa (P) Phenyl (E) ethyl (A) amine kan kalena waa (P) Palmitoyl (E) ethanol (A) amide. Sidoo kale, dadku waxay isku qaldaan Phenylethylamine iyo Phenylalanine markasta, iyo sidoo kale Cytisine iyo Cysteine. Marmarka qaarkood xeryahooda kiimikada ayaa loo higgaadiyaa si aad isugu dhow, mararka qaarkoodna waxay soo gaaraan isla soo gaabis. Ma dhihi karo waan jeclahay, laakiin Palmitoyalethanolamide waa af badan yahay. Marka soo gaabinta waa wax aad u fudud.
Waxaan u qaatay xanuunka kaadi heysta (sababta aan la garaneyn) weyna shaqeysay. Sidoo kale waa maaddada ugu weyn ee dawadayda eeygu (xasaasiyadda) waxayna umuuqataa inay ku caawinayso.
Wax saameyn ah oo noogu imanaya ma jirto. Wax saameyn ah kuma yeelan hurdadayda. Oh! Laakiin sidoo kale waxay iga takhalustay jilibkeyga xanuun, taas oo ahayd abaalmarin lama filaan ah.
PEA waxay iga caawisaa inaan ogaado in aan qabo heer hoose oo xanuun ah, waana wax fiican marka taasi yaraato in yar.
Waxaan la xanuunsanayay xanuun daran oo dhabarka ah muddo ku dhow toban sano. PEA waxay ka dhigtaa mid dhexdhexaad ah, oo markii xanuunkeygu yahay caro caajis caadi ah, PEA waxay umuuqataa inay jirkeyga oo dhan ka dhigeyso mid raaxo leh.
Palmitoylethanolamide waa amide acid fido leh. Taasi waxay ka dhigan tahay inay jirkaaga ku jirto hadda. Dadka qaarkiis ayaa uun ka dhigaya wax yar, heerarkaaguna waxay hoos u dhacaan markii aad sii weynaato. Marka kabku wuxuu kaa caawin karaa soo celinta heerarkaas. Waxaa sidoo kale laga helaa cuntooyinka, sidoo kale. Aad bay amaan u tahay. Dadka intiisa badani ma fahmaan waxa ay tahay, oo gebi ahaanba waa ay seegeen ujeedka. Haddii aad tahay qof leh heerar dabiici ah oo wanaagsan oo ah PEA jirkaaga, waxay u badan tahay inaadan waxba dareemi doonin. Si kastaba ha noqotee, dadka si dabiici ah u leh heerar hoose ayaa si xoog leh u dareema saameynta. Tani waa sababta aad u aragto aragtiyo kala-bax ah.
Hadda oo ku saabsan su'aashaada ku saabsan COX-2 gaar ahaan, waa modulator ka mid ah COX-2, ma ahan ka hortag tartan. Waxay ku xidhan tahay qabtayaasha endocannabinoid GPR55 iyo GPR119. Taasi waa sida ay u xakameyso muujinta cyclooxygenase-2 (COX-2) iyo sidoo kale maadada loo yaqaan 'nitric oxide synthase' (iNOS). Sidoo kale waa agoniste PPAR-,, kaas oo nidaamiya nabaad-guurka IkB-alpha iyo p65 NF-kappaB wareejinta nukliyeerka. Isku xirnaanshaha 'PPAR-PAR' dhab ahaantii waa sida ay u yareyneyso neuroinflammation. Dusha sare ee isku xirnaanshaha tooska ah, waxay u horseedaa xirxirida anandamide ee loo yaqaan 'CB1' iyo 'CB2 receptors', taas oo ah endocannabinoid jirkaaga aasaasiga ah. Waa dhismo runtii qabow!
Kaliya waxaan rabay inaan sameeyo qoraal ku saabsan walaxdan aan la aqoon taas oo rajo weyn u leh bukaanka xanuunka daba dheeraada. Palmitoylethanolamide (PEA) waa amide acid fatty ah oo ku dhacda si dabiici ah jirka bini'aadamka iyo jirka xayawaano iyo dhir kale oo badan. Dhakhtar Talyaani ah oo lagu magacaabo Rita Levi-Montalcini ayaa ogaatay in PEA ay leedahay astaamo anti-bararka iyo xanuun joojiyaha
Laba indhoole, tijaabinta xakamaynta xakamaynta ee leh 636 bukaanjiifka xanuunka, tirada loo baahan yahay in lagu daaweeyo (NNT) si loo gaaro 50% dhimista xanuunka marka la barbar dhigo aasaasiga waxay ahayd 1.5 kadib 3 toddobaadyo daaweyn ah
PEA waxaa lagu baarayaa noocyo badan oo xanuun ah. Wax saameyn ah oo daawada ah lama arag inta aan sheegi karo.
Dib-u-eegis yar oo looga hadlayo isticmaalka Palmitoylethanolamide ee daaweynta xanuunka daba dheeraada. Waxaa jira daraasado kooban oo ku saabsan bukaanka IBS iyo moodooyinka xayawaanka ee IBS. Marka la eego doorka nidaamka endocannabinoid ee habka caloosha iyo mindhicirka waa maqaal xiiso leh oo lagu sii baaro doorka PEA iyo qabtayaasha la xiriira daaweynta xanuunka.
Sidee amaan u yahay Palmitoylethanolamide (PEA)?
Waxaan dhawaan dalbaday xoogaa budada PEA ah oo maanta uun bay ku timid boostada. Waxaan sameynayey xoogaa cilmi baaris dheeraad ah oo ku saabsan haddii ay jirto wax khatar ah PEA sababtoo ah waa COX2 inhibitor.
Ammaan miyaa aniga inaan qaato PEA?
Palmitoylethanolamide wuxuu u daaweeyay xanuunka neerfaha sida mucjiso!
Waxaan doonayay inaan tan tuuro maadaama laga yaabo in qof kale u arko inuu tan faa iido u leeyahay sidii aan sameeyay. Waxaan ku jiray xanuun dareemayaasha aan la qaban karin muddo ka badan 20 sano. Waxaan imid Stanford, waxaan kusugnaa wax walba laga soo bilaabo Fentanyl ilaa morphine ilaa oxygen iyo benzos, anti depressants iwm. Waxaan soo maray dhowr qaliin iyo waxyaabo la isku dayay sanadihii la soo dhaafay laakiin qofna ma soo jeedin inaan tijaabiyo maaddadan fudud. Waxyaabaha qaar ayaa caawiyey laakiin waxba ma tarin. Maalin kasta waan jiifaa ama fadhiistaa. Mararka qaar way adkeyd in la lugeeyo. Arrinta neerfaha ee laf-dhabarkayga hoose ee qalliin hore oo saameynaya dareemahayga jilicsan. Hurdadu waxay ahayd wax aan helay 30 daqiiqadood markiiba isla markaana badiyaa maalmo aan qaadan jirin haba yaraatee.
Dhawaan qof aan ogahay ayaa ii soo jeediyay inaan isku dayo wax la yiraahdo PEA. Waxaan lahaa eber iimaan way shaqeyn lahayd. Laakiin waxay u muuqatay mid ku filan badbaado. Waxaan bilaabay walax laga heli karo Amazon oo la bartay 60 sano waligayna weligay ma maqal. Magaceeda loo yaqaan Palmitoylethanolamide (PEA, oo aan lagu qaldin Phenethylamine oo sidoo kale loo soo gaabiyo PEA) Palmitoylethanolamide waxaa si dabiici ah looga helaa jirkeena iyo cuntadeena. Waa "amide fatty acid amide" taas oo saameyn weyn ku leh nidaamka endocannabinoid (waxayna sare u qaadeysaa anandamide, cannabinoid-keena endogenous).
Waxaan qaataa 120mg laba jeer maalintii. Marka hore waxba kamaan ogaan. Xaqiiqdii usbuucii ugu horreeyay wuxuu ka mid ahaa cilladaha ugu xun ee aan in muddo ah qabtay. Toddobaadkii labaad ayaan toosay hal subax anigoo ogsoon inaan xalay oo dhan seexday. Xanuunkaygu waa iga dhammaaday. Waxaan is tusay inay tahay taallo. Waxaan ka ooyay farxad darteed midna ma yareyn. Hore ayuu u xirmay maalmo ka hor. Hagaag waxay sifiican ujirtay mudo bil ah walina wax xanuun ah majiraan. PEA waxaa loo yaqaanaa inay u shaqeyso sidii anti-bararka iyo xanuunka neerfaha. Qaar ka mid ah tijaabooyinka caafimaad ee yar yar ee FDA ayaa xitaa muujiyay ballanqaad ku saabsan aagaggaas.
Waxaa jira TON sheegashooyin ay sameeyeen dadku in PEA ay daaweyn doonto dhammaan noocyada wax. IDK ku saabsan intaas oo dhan. Waxa kaliya ee aan ogahay ayaa ah caawinta xanuunkayga in kabadan wax kasta oo aan waligay qaatay. Waxaan ka baxay daawadeyda xanuunka 100%. Waan ka baxay daawooyinkeygii oo dhan walina xanuun maleh !!! Dhakhaatiirteyda maskaxdaydu way kacday waxayna isku dayeysaa iyada iyo bukaanno kale.
Haddii aad isku daydo sii toddobaadyo wanaagsan. Waxay u qalantaa xabbad. Lama yaqaan inay la macaamisho daawooyinka kale ama ay leedahay xaddad sun ah oo la yaqaan laakiin sida wax waliba gaabis u bilaabaan. Qiyaasaha ka sarreeya 300mg ayaa isiiya madax xanuun yar.
Waxay kaliya ka shaqeysaa xanuunka neerfaha. Weli waxaan dareemayaa xanuun iyo xanuun caadi ah. Haddii kale waxaan dareemayaa wanaag. Haddii aad ku xanuunsato xanuunka neerfaha ee durugsan waxay u qalantaa inaad ku siiso tallaal.
Magnesium wuxuu caan ku yahay inuu keeno riyooyin waalan, 5-HTP wuxuu la falgalaa riyada sidoo kale iirc.
Ma qaadan karo magnesium wax ka yar 3h ka hor intaanan seexan ama haddii kale aad baan u riyoodaa, ma helo hurdo fiican.
Waxaan arkay Palmitoylethanolamide dhawaan waxaanan isku dayi lahaa. Waxay ahayd qiyaastii toddobaad ama wixii ka dambeeyay markii aan bilaabay isticmaalkiisa oo xoogaa way i caawisay.
Waxay iga dhigeysaa inaan dareemayo nafis badan taas oo ah wax aanan fileynin.
Palmitoylethanolamide, Cunto Gaar ah oo loogu talagalay Ujeeddooyinka Caafimaadka, ee Daawaynta Xanuunka Daba-dheeraada: Falanqaynta Meta-Xogta ee La Dajiyay. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26815246
Palmitoylethanolamide iyo Oleamide
Mawduuc ahaan, kala duwanaansho kasta oo ku saabsan sida labadan astaamood ee dufanka badani u saameeyaan adiga?
Labadooduba waxay umuuqdaan kuwo aad isugu eg moa, mana hubo inay uqalanto in midba kan kale iskudayo. Badanaa raadinta dheellitirka 'Immune dheelitirka', gunno loogu talagalay xoojinta tayada hurdada.
Tani waa ra’yigeyga
Joogtayntu waxay ahayd ganaax, budo cad. Si iskood ah loo qaatay, waxay ahayd mid aan dhadhan lahayn oo si tartiib tartiib ah u milmay, laga yaabee inay tahay biyo aan ku milmin.
Waxaan waayo-aragnimo weyn ku soo qaatay 10 maalmood gudahood laga bilaabo xilligii aan bilaabay qaadashadiisa.
Hadda dhowr bilood ayaa laga joogaa waana jeclahay. Waxaan dareemayaa wax badan oo wanaag ah mana aanan dareemin waxyeellooyin soo raaca.
Waxaan qaadanayaa 600 mg laba jeer maalintii iyo waxoogaa ka badan usbuuc natiijooyinkuna waa kuwo aad u fiican.
Wax dhibaato ah kuma qabo magnesium laakiin 5htp ka hor sariirta ayaa i siisay riyooyin ka hor. Waxay ahayd inaan u wareejiyo 5htp illaa galabtii.
Palmitoylethanolamide waxa la iga nasiyey xanuunka fibromyalgia. Haddana ma toosin anigoo dareemaya in hurdadii la igu garaacay rebar.